Iwe unofunga inguva yekuhaya chirongwa chepenjeni? | Ehupfumi Zvemari
Jose recio | | Zvirongwa zvepenjeni, Zvigadzirwa zvemari
Muna Kubvumbi, mazhinji emakesi esisitoko emakesi akavhara mwedzi nekutenda, zvichibvumira zvirongwa zvepenjeni nekuratidzwa kwakanyanya kumatoko kuti ave neruzivo. yakanaka inodzoka, maererano neazvino dhata yakapihwa neAssociation of Collective Investment Institutions uye Pension Funds (Inverco). Iko kunoratidzwa kuti purofiti yepakati nepakati yemapurani emari inoshanduka yaive 4,62% uye yeaya akasanganiswa marongero emari aisvika 1,29%.
Chirevo ichi chinoratidzawo kuti mukufamba kwenguva, iwo wega marongero epenjeni anonyoresa avhareji yekudzoka kwegore (mambure emari nemakomisheni) e3,61% uye, munguva yepakati (makore mashanu ne5), vanopa kubatsirwa kwe1,97% uye 3,50%, zvichiteerana. Ipo kune rumwe rutivi, zvinotsigirwa kuti huwandu hunofungidzirwa hwezvipo uye mabhenefiti mumwedzi waApril angave: zvipo zvakakura zve192,4 mamirioni euros uye mabhenefiti akakomba e193,1 mamirioni euros, nawo huwandu hweNet mabhenefiti emwedzi iwoyo. kusvika 0,8 mamirioni euros.
Nepo kune rumwe rutivi, zvinofanirwa kusimbiswa kuti rudzi urwu rwekudyara rwunoitirwa inoenderana neruzhinji rwepenjeni system panguva yekurega basa. Nechiitiko chakakosha chekuti ndiye anotora chikamu iye amene anosarudza mipiro kuti iitwe kuzvirongwa zvepenjeni. Kubva pamwero wakaderera kune vamwe izvo zvinonyanya kudzvinyirira uye zvinogara zvichienderana nezvinotarisirwa kuti utore rako rekurega basa mumakore egoridhe ehupenyu hwako. Iko, sekuratidzirwa neAssociation of Collective Investment Institutions uye Pension Funds, icho chigadzirwa chemari chiri kuwedzera kondirakiti nevanhu.
1 Zvirongwa zvepenjeni: nguva yekuvashandira?
2 Ndeupi mhando yechigadzirwa chakakukodzera?
3 Ndeipi penjeni yandichava nayo?
4 Wedzera icho zvishoma nezvishoma
5 Wedzera pension yeruzhinji
Zvirongwa zvepenjeni: nguva yekuvashandira?
Iko kusahadzika kwekutanga kunorova vangangobata ichi chigadzirwa chakagadzirirwa kuenda pamudyandigere ndipo pavanofanira kuzvinyorera. Muchinhu ichi, chokwadika, hapana mimwe mitemo yakamisikidzwa uye zvakanyanya kuomarara, ndosaka ichipa kuchinja kukuru kune zvishuwo zvevachaenda pamudyandigere. Nekuti zvirikuitika, zvinogona kuitwa chero nguva uye pasina kukamurwa kwenguva. Kubva pane ino maonero, zviri nyore kuziva kuti marongero epenjeni chigadzirwa chakavhurika kune chero chimiro chevadiki nepakati saver. Mune mamwe mazwi, hapana mhando yezvirambidzo kana zvasvika pachinhu ichi.
Chero zvazvingaitika, kuti chirongwa chepenjeni chive chinobatsira zvakanyanya, chinofanirwa kuve chakarongedzwa nekukurumidza sezvazvinogona. Uye kwete kana pangosara makore mashoma kuti uende usati waenda pamudyandigere, nekuti hapana mubvunzo kuti purofiti yako ichadzikira zvakanyanya. Mupfungwa iyi, kunyorera semuenzaniso chirongwa chepenjeni pamusoro pemakore makumi mashanu izano rakanaka re Zvidzivirire mune zvemari kubva pazera remakore makumi matanhatu nematanhatu. Iri ndiro zera rekurega basa kubva pagore ra2027 uye nekudaro ichave iri poindi yekureva kuti iwe unofanirwa kuverengera pamari yauchazowana kubva musi iwoyo.
Ndeupi mhando yechigadzirwa chakakukodzera?
Zvirongwa zvePension, semari yekudyara, inogona kuve yemhando dzakasiyana. Nekuti zvirizvo, kune hurongwa hwepenjeni hwakavakirwa pamari inoshanduka, mari yakatarwa, yemhando yakasanganiswa uye kunyange mamodheru anonzi mamwe. Kubatsira kwavo kunoenderana nemabatiro avanoita kana shanduko mumisika yavo yemari. Iwe unofanirwa kutora sereferenzi sosi kuti uone yako purofiti mazwi e10, 20, 25 kana kunyange mamwe makore. Iko iko wepakati gohwo kunogona kuverengerwa kutenderedza 5% kana 6%, kunyangwe pakupera kwezuva zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzinozove chinhu cheumwe kurapwa mune ruzivo.
Chero zvazvingaitika, kana iwe uri inodzivirira kana inochengetedza chimiro Chinhu chine musoro ndechekuti iwe unyore chirongwa chakatemwa chemudyandigere, uko njodzi dzichava dzakaderera zvakanyanya. Kunyangwe kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti mwero wekufarira unenge uchinge wakaganhurirwa uye kusvika padanho rekuti haugone kudarika nhanho dzakapoterera 7%, semuenzaniso Chero zvazvingaitika, sarudzo inoenderana nemari yaunoda kuchengetedza kubva zvino uye nemabatiro aunoda kuti pension ive. Kubva pane ino maonero, iyo pension chirongwa inogona kuve nehasha kana zvine mwero uye zvinoenderana neizvi, sarudza yakanakisa modhi pamusika.
Ndeipi penjeni yandichava nayo?
Hapana mubvunzo kuti kuziva mudyandigere wauchazogamuchira mushure memazana makumi matanhatu nematanhatu kwakakosha kuona kuti ndeupi hurongwa hwepenjeni waunofanira kurongedza kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti hazvisi zvakafanana kugamuchira mudyandigere wepension we67 1.500 euros pamwedzi pane a pension isingabatsiri uye iyo huwandu hwayo hausvike pamazana mazana mana emaeuro pamwedzi. Mune ino yekupedzisira kesi, iwe unenge usina imwe sarudzo asi kuisimbisa kuburikidza nesaver yakachengetwa muhurongwa hwepenjeni, chero zvayakaita. Kune, sezvazvinogona, zvirinani, uve nemari inosvika mazana mapfumbamwe emamiriyoni pamwedzi. Kana mari inowanikwa kubva kune isingabatsiri pension uye iyo inogadzirwa nekutenga ichi chigadzirwa chemari chawedzerwa.
Chimwe chinhu chaunofanirwa kuongorora mukuita kwayo ndeye iyo ine chekuita nemari yaunogona govera kune ichi chigadzirwa chemari. Zvinoenderana nemari yaunogashira mwedzi wega wega uye kwete mune zvese zviitiko zvichaita mamiriro akafanana uye zvinoda kumuka, sezvo zviri nyore kunzwisisa kubva pamaonero evashandisi. Iyo yakakwira mipiro yako, iyo yakawanda mari yaunounganidza kana nguva yekupedzisira yekurega basa yasvika. Mune mamwe mazwi, kuita nhamburiko yezvehupfumi kunogara kuchikubhadhara. Chero bedzi iwe uine zviwanikwa zvinodiwa kuti uwane izvi zvisingafungidzirwe mari mumhuri kana bhajeti rako pachako.
Wedzera icho zvishoma nezvishoma
Pane mutemo wegoridhe muzvirongwa zvepenjeni unoti sezvo nguva yekurega basa yasvika, zvichave zvakafanira kuti iwe uwedzere huwandu hwako hwepenjeni zvirongwa. Kuti usvike pakakwirira mu makore ekupedzisira ehupenyu hwako hwekushanda. Iri izano rinoshanda kwazvo rekuriita sezvo uchigona kufungidzira akawanda maeuro auchazogamuchira mumakore egoridhe ehupenyu hwako. Izvo zviri kumagumo ezuva chii chiri chekushandisa mune chero nzira yekudyara. Kupfuura imwe nhevedzano yehunyanzvi hwekufunga nezve zvemari zvigadzirwa ivo pachavo. Nekuti izvo zvazviri ndezvekuti iwe unowana mari yepamusoro kubva kune chaiwo nguva.
Nepo kune rimwe divi, zviri kune imwe pfungwa zvine musoro kuti kana iwe ukanyorera chirongwa chepenjeni mumakore ekupedzisira ehupenyu hwako hwekushanda, ivo vanofanirwa mari yakasiyana-siyana. Zvekuti nenzira iyi unogona kukwidza mwero wemubereko uyo chigadzirwa ichi chekurega basa chichagadzira. Kunyangwe iyi fungidziro yemubatsiro wayo isingafanirwe kuzadzikiswa. Nekuti pakupedzisira ichave misika yezvemari inoisa marongero epenjeni munzvimbo yavo chaiyo. Izvo zviri nyore uye kuronga hakuna kukosha mune izvi. Kwete zvishoma.
Wedzera pension yeruzhinji
Kuhaya chero hurongwa hwepenjeni kune zvakawanda zvinangwa uye zviri nyore kuti iwe uzvitorere kubva izvozvi kuronga makore egoridhe ehupenyu hwako. Imwe yeakanyanya kukosha anogara mukuti inoumba zano chairo rekuwedzera rako repenjeni yeruzhinji, kungave kuri kupa kana kwete. Saka unogona vane simba rakakura rekutenga kubva pamakore makumi matanhatu nemana. Chimwe chazvo ndechekuti icho chinokutendera iwe kuti uve nezvimwe zvekuwana mari mumakore ano uye nekudaro haufanire kuvimba nepension pension. Uye zvakare, ihurongwa hwekuenzanisa iwo muhoro wawaive nawo usati wasvika pamudyandigere.
Kune rimwe divi, usakanganwa kuti ndiwe uchave unosarudza mari yauchazofanira kupa muzvirongwa zvepenjeni. Sezvinei, unogona kuzvironga zvichienderana nemamiriro ako ezvinhu uye izvo zvauchazochaja kune yeruzhinji pension system. Panguva ipi neipi iwe paunogona kuwedzera kana kudzikisa fizi kana pachinzvimbo mipiro iwe yaunopa kune ino yekuchengetedza chigadzirwa kune vanhu. Kugona kusarudza pakati pemamodeli akasiyana ayo anotengeswa nemabhangi nemakambani einishuwarenzi.
Kubva pane akajairika mamiriro, kune akawanda marongero aunogona kuita kubva zvino zvichienda sezvo chiri chinochinja-chinja chigadzirwa. Izvo zvinogona kuchinjika kune ese mamiriro ezvinhu aunowana iwe uchibatanidzwa, kunyangwe kana iwe usingashandi. Kubva pane akasiyana zvachose maprofiles emushandisi uye zvakasiyana nezvimwe zvigadzirwa zvinowedzera static uye hazvigone kuchinjiswa kune yako mbiri sekuda kwechigadzirwa chemari ichi. Chero zvazvingaitika, zvinogara zvichibatsira zvikuru kuzvinyorera kuitira kuti ugamuchire imwe mari kana hupenyu hwako hwekushanda hwapera. Ndokunge, pakupera kwezuva, chii chinobatanidzwa mune idzi dzakakosha kesi. Kugona kusarudza pakati pemamodeli akasiyana ayo anotengeswa nemabhangi nemakambani einishuwarenzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Zvirongwa zvepenjeni » Iwe unofunga inguva yekuhaya chirongwa chepenjeni?